आईएनएफ नेपालको २८ औं वार्षिक साधारण सभा : NepalChurch.com
आईएनएफ नेपालको २८ औं वार्षिक साधारण सभा
[0] October 3, 2019	| NC Reporter
हरियो खर्क, पोखरा, १३ असोज
हरियोखर्क अस्पताल परिसरमा आईएनएफ नेपालको २८ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। प्रमुख अतिथि पोखरेली ख्रीष्टिय समुदायका उपाध्यक्ष रामप्रसाद शर्माले गमलाको बिरुवामा पानी हालेर कार्यक्रमको समुद्घाटन गरेका थिए। उनले पोखरेली ख्रीष्टिय समुदायसँग आई.एन.एफ. नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको चर्चा गर्दै हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। कार्यक्रमको स्वागत गर्दै आई.एन.एफ. नेपालका उपाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार अधिकारीले संस्थाको आत्मनिर्भरतामा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रमका वक्ता पा. ग्रीष्म पराजुलीले यूहन्ना ३:१६ बाट बोल्दै निस्वार्थ प्रेमको बारेमा प्रकाश पारेका थिए। उनले यस्तै प्रेमबाट ओतप्रोत भएर आई.एन.एफ. नेपालले नेपालमा सेवा सुरु गरेको बताए। उनले भने, “यस्तो प्रेमबाट निर्देशित नभएको भए मिसनरीहरुले आफ्नो देशको सुखसुविधा त्यागेर त्यो बेलाको नेपालमा काम गर्न सक्ने थिएनन्।”
कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारीले आई.एन.एफ. नेपालको संस्थागत जानकारी दिँदै भावी योजनाबारे जानकारी दिएका थिए। उनले आईएनएफ नेपालको स्थापना सन् १९५२ मा भएको हो। यस संस्थाले गरिब, अशक्त, कुष्ठरोगी, क्षयरोगी, एचआईभी एड्स, द्वन्द्व प्रभावित, लागूपदार्थ दुव्र्यसनी र सीमान्तकृत समुदायबीच काम गर्दै आएको बताए।
सचिव धनमाया गुरुङले कार्यकारिणी समितिको प्रतिवेदन २०७५÷७६ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यस्तै कोषाध्यक्ष धना लामाले आ.व. २०७५÷७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र आ.व. २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
आई.एन.एफ. नेपालका अध्यक्ष रामचन्द्र तिमोथीले आई.एन.एफ.को दिगो विकासमा जोड दिएका थिए। उनले आफूले बिजनेर मोडलमा जानुपर्ने बताउँदै भने, “संस्थाको साधनस्रोतलाई चलाएर त्यसबाटै आम्दानी सिर्जना गर्नुपर्दछ। अहिले हरियो खर्क भित्र सञ्चालित कृषि फार्मबाट संस्थाको खर्चमा एक तिहाई योगदान हुन सकेको छ। यसलाई बढाउँदै आई.एन.एफ. आत्मनिर्भर बन्नुपर्दछ। सधैं मागेर मात्रै चल्दैन।”
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै डा. शिवराम श्रीमलले हरियो खर्क अस्पतालसँगको आफ्नो निकटताको बारे बोल्दै हरियो खर्क अस्पतालले आफ्ना कमीकमजोरीमा सुधार गर्दै भेलोर हस्पिटलको मोडलमा जानुपर्ने कुरामा जोड दिए।
साधारण सभामा नयाँ कार्यकारिणी समति सदस्य चयन गरिएको छ। नयाँ सदस्यहरुमा भीमकुमारी श्रेष्ठ, यम जोशी र माधव न्यौपाने चयन भएका छन्।
« A home away from home at 29 Eleven bed and breakfast
मानार्थ विद्यावारिधिको वास्तविकता || पा. चेत बहादुर खरेल »